How Does ETI work isiZulu
SARS Home > Types of Tax > Pay As You Earn > Employment Tax Incentive (ETI) > How Does ETI work isiZulu
​USEBENZA KANJANI UMHLOMULO WENTELA YABASEBENZI (I-ETI)
Isu-Ngqangi: Ukuze uthole ukuthi ungumqashi owulungele lo mhlomulo cindezela lapha.
Abaqashi abakulungele lokhu kuzofanele babale umhlomulo nyanga zonke bese befaka isicelo. Lesi samba kufanele sigcwalise Kwisidaluli Somqashi Sanyanga Zonke (EMP201), esiyachitshiyelwa.
Isu-Ngqangi: Khumbula ukuthi ungafaka isicelo somhlomulo we-ETI kusukela ngoMasingana 2014 sabo bonke abasebenzi abaqashwe kusukela zingu-1 kuMfumfu 2013. Isamba esizocelwa makungabi ngesibalwe kusukela ngoMfumfu 2013. I-ETI iqale ukusebenza zingu-1 kuMasingana 2012, kanjalo umqashi angakwazi ukufaka isicelo se-ETI kusukela ngalolo suku.
Ngiyibala kanjani i-ETI yami?
Landela lezi zigaba ezine njalo ngenyanga ukuze ubale i-ETI ongakwazi ukuyifakela isicelo:
Hlonza bonke abasebenzi abakulungele lokhu ngaleyo nyanga
Bala isikhathi sokusebenza salowo nalowo msebenzi okulungele.
Bese ubala kahle “umholo wanyanga zonke” womsebenzi ngamunye
Uma ubala isamba somholoesizosetshenziswa ukuba la i-ETI, uma umsebenzi ofanelekile eseqashwe :
Amahora ali-160 enyangeni, kumele kusetshenziswe isamba somholo qobo
Ngaphansi kwamahora ali-160 enyangeni, umholo kufanele ukhushulelwe emahoreni ali-160 ngenyanga ukuze kubaleke isamba se-ETI. Nesamba singabalwa-ke bese siphinde sehliswe ngesikalo esifanayo.
Uma umsebenzi ofanelekile eqashwe amahora angama-80 enyangeni futhi eholelwa u-R1500, umholo kufanele ubalelwe emahoreni ali-160 ukuze kuhlonzwe ukuthi ingabe leso samba singena esigabeni sezidingo zamaholo na.
Bheka umholo wamahora ali-160 ngenyanga: “Balela phezulu kumahora ali-160”: 160/80 amahora = 2
Isamba ngqo somholo X 2 = R1 500 X 2 = R3 000 (within the wage requirements).
Bala isamba somhlumulo somsebenzi ngamunye ofanelekile ngohlaka olungezansi.
Qaphela: Uma umsebenzi eqashwe ngaphansi kwamahora ali-160 ‘wabalele phansi’ njengoba kade ‘uwabalele phezulu’. Lokhu kusho ukuthi i-ETI engafakelwa isicelo kufanele ihlukaniswe ngokubili esibolweni esingenhla.
Isu-Ngqangi: Khumbula ukuqala ngokubala okukubakaki njalo.
Umhlomulo Wentela Yabasebenzi ngenyanga ngesikhathi sezinyanga ezili-12 zokuqashwa komsebenzi ofanelekile.​​​
​Umhlomulo Wentela Yabasebenzi ngenyanga ngesikhathi sezinyanga ezili-12 ezilandelayozokuqashwa komsebenzi ofanelekile.
​​50% womhlolo wanyenga % womhlolo wanyenga
R 2 001 - R4 000​
​R1 000 ​​R500
R1 000 – (0.5 x (Umholo wenyanga – R4 000))
Isigaba 1: Emholweni wenyanga susa u-R4 000
Isigaba 2: Imiphumela yesigaba sokuqala sihlephule maphakathi
Isigaba 3: Kwi-R1000 susa isamba esibalwekwisigaba 2
R500 – (0.25 x (Umholo wenyanga – R4 000))
Isigaba 1: Emholweni wenyanga susa -R4 000
Isigaba 2: Imiphumela yesigaba sokuqala bese uthatha ikota yaleso samba
Isigaba 3: Ku-R500 susa isamba osibale esigabeni 2
Isu-Ngqangi: Amasu okubala ngesinye isikhathi kunzima ukuwaqondisisa ngakho sinesibonelo esiveza izigabange ngezigaba, cindezela lapha.
Ukubala isikhawu sezinyanga ezili-12 sokuqala noma sesibili, yizinyanga umsebenzi abeqashwe ngazo kuphela okubalelwa kuzo.
Umsebenzi waqasahwa ngo 1 kuNdasa 2015 walungela i-ETI yezinyanga uNdasa, uMbasa, uNhlaba. Ngenxa yokuthola enye imali ngaphezulu, umsebenzi akabange esayilungela i-ETI ngoNhlangulana nangoNtulikazi. Kusukela ngoNcwaba, umsebenzi uthole umholo ovamile wabe eselungela i-ETI futhi. Ukuze ukhiphe i-ETI usebenzisa izinyanga ezili-12 ukubala, uNdasa, uMbasa, uNhlaba, uNcwaba kuze kube nguMbasa kufanele babandakanye. Lokhu kusho ukuthi ukubala i-ETI usebenzisa izinyanga ezili-12 ezifanelekile ngokwe-ETI hhayi ezekhalenda nje.
Last Updated: 20/07/2016 2:40 PM ​